OLI – Oromia Leadership Initiative
Hojiiwwaan akk OLItti hojjatamu keessaa inni tokko hojii gorsaafi deeggarsa yaadaa waliif kennuutiRead more Advisory Services
Namni barumsa argachuuf dirqama mana barumsaa qofa dhaquu hin qabu. Namni walirraa eddoofi haala garagaraa keessatti barachuu ni danda’a. Akkaataalee dandeettiifi beekkumsa keenya ittiin cimsannu keessaa inni tokko namoota waan hedduun nu dursan waliin hidhata godhannee irraa barachuudha. Biyyoota guddatan hedduu keessatti kuni adeemsa guddinaaf dagaagina ilmoo namaatiif sirriitti itti fayyadamu. Biyyoota guddachaa jiran keessatti … Read more Mentorship
Yeroo ammaa kanatti Adduunyaan jijjiirama saffisaa keessa jirti. Jijjirama yeroo kanaan waliin tarkaanfachuudhaaf immooRead more Current Affairs
Beekkumsi bu’uurafi utubaa waan hundaati. Dhaloonni tokko biyya isaatiif karaa hawaasummaa, dinagdee, siyaasaafii kanneen birootiinis bu’aa buusuudhaaf beekkumsa gahaa qabaachuu qaba. Read more Book Reviews
Yeroon amma keessa jirru yeroo walitti hidhatni Adduunyaa ( Globalization) garmalee itti dagaagedha. Adduunyaan walitti dhufeenyi isii yeroodhaa gara yerootti dabalaa adeemu kana keessatti Read more
Akka ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2017 irraa argametti baay’inni dargaggoota Adduunyaa keessa jiranii biiliyoona 1.2 oli. Akka ardii Afrikaattimmoo baay’inni dargaggootaa dhibbeentaa 60 ol akka ta’e himama. Akka biyya keenyaattis lakkoofsi dargaggootaa baay’ee danuudha. Humni kuni dhaloota hoo’aa, si’aawaafi kan misoomafi dagaagina biyyaatiif tumsa ol’aanaa gumaachuu danda’uudha. Humni kuni yoo akkaataa barbaachisuun faaydaarra hin … Read more About Us
Kitaabbileen Armaan gadii kanneen xiyyeffannaan itti kennamee cuunfaan isaanii dargaggoota keenyaaf dhiyaatu ta’a. Emotional Intelligence Ethical Leadership Servant Leadership Transformational Leadership Long Walk to Freedom, Nelson Mandela’s Book Keys to Success by Napoleon Hill The 21 Irrefutable Laws of Leadership Leadership Qualities The Power of Failure Think and Grow Rich Goals Psycho-Cybernetics My Experiment with Truth, Mahatma … Read more Book Reviews
Akka ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2017 irraa argametti baay’inni dargaggoota Adduunyaa keessa jiranii biiliyoona 1.2 oli. Akka ardii Afrikaattimmoo baay’inni dargaggootaa dhibbeentaa 60 ol akka ta’e himama. Akka biyya keenyaattis lakkoofsi dargaggootaa baay’ee danuudha. Humni kuni dhaloota hoo’aa, si’aawaafi kan misoomafi dagaagina biyyaatiif tumsa ol’aanaa gumaachuu danda’uudha. Humni kuni yoo akkaataa barbaachisuun faaydaarra hin oolin qisaasama guddaadha.
Akka Oromiyaattis yoo ilaalle gaheen dargaggoon/ qeerroon keenya kallatii hundaan gumaachaa jiru baay’ee ol’aanaadha. Keessatuu yeroo ammaa kanatti dargaggoon keenya itti gaafatamummaa fudhachuudhaan dhimmoota murteessoo uummata keenyaa irratti gaheen inni taphachaa jiru baay’ee guddaadha. Haa ta’u malee dargaggeessi keenya ammas hamma barbaadamu socho’ee guddinaafi dagaagina biyyaa irratti shoora ol’aanaa taphachuudhaaf hudhaaleen isa rakkaa jiran baay’edha. Kana keessaa rakkoon guddaan hoji dhabdummaa, galii baay’ee gadi aanaa ta’e argachuu, carraa barumsaa dhabuufi kkf kanneen muraasa. Hudhaalen kunneen dargaggeessa keenya sakaalanii akka ofdura isa hin tarkaanfanne sakaallaa hamaa itti ta’u.
Bu’uurri OLI rakkooleen bu’uurawoon guddinaafi dagaagina dargaggootaa ilaalcha isaanii ta’uu isaa amanuu irraa madda. Dargaggeessi ilaalcha ( attitude) isaa irratti cimsee yoo hojjate, miira injifannootiin yoo guutame, rakkoo kamiyyuu bira dabree waan yaadu hunda dhugoomsuu akka danda’u yoo amane, kaayyoodhaan yoo masakame, kaayyoo lafa kaawwate galmaan gahuuf waan barbaachisu hunda yoo godhe ofiifis jireenya isaa jijjiiratee uummata isaatiifiis bu’aa guddaa buusuu akka danda’utti amana.
OLIn dargaggoonni keenya xiinsammuun isaanii akka lelisu, leenjii hoggansaa akka argatan, muuxannoo jireenyaa namoota muuxannoo akka qoodatan akkasumas dhimma kamiyyuu irratti deeggarsa gorsaafi yaadaa akka argatan hojjata. Gabaabumatti kaayyoon ijoon OLI kanneen asii gadiiti;